China Plate sy Tube Laser Cutting Machine mpanamboatra sy mpamatsy | Guo Hong
Ny takelaka vita amin'ny takelaka sy ny fantsom-bozaka dia mahatsapa ny fanapahana endrika roa samihafa amin'ny fitaovana milina iray ihany. Izy io dia mandray, rafi-pandrefesana sy pinion drive, ary rafitra cnc fanapahana matihanina, ary mora ny miasa ary tsotra ny mitazona azy. Ankoatr'izay, ny fizotran'ny fivoriana henjana dia miantoka ny fiasan'ny milina fanapahana laser laser amin'ny alàlan'ny fametrahana mazava tsara. Masinina fanapahana laser fibre optika miaraka amina kojakoja avo lenta avo lenta, izay manome ny mpampiasa fahaiza-manao fanapahana mahery vaika sy fahombiazana. Noho izany dia io no safidy tsara indrindra amin'ny fanodinana lovia ara-toekarena sy fantsona.
Milina fanapahana laser sy lovia
Fampiasana indroa sy fitehirizana vola
Ny roa amin'ny iray dia afaka manapaka ny takelaka sy ny fantsona
Rindran'ny alimo alimo
Ny alimoara Aerospace dia vita amin'ny fenitra aerospace. Rehefa vita ny fahanterana artifisialy sy ny fitsaboana vahaolana dia vita. Ny hamafisana dia mety hahatratra T6, ary manana ny mampiavaka azy ny hamafin'ny tsara sy ny fahakiviana.
Maivana amin'ny lanja, mety amin'ny fivezivezivezena haingana mandritra ny fanodinana, ary malefaka be. Izy io dia afaka mampitombo be ny hafainganam-pandeha rehefa vita ny tena marina.
Ny loha laser dia vita amin'ny fitaovana avo lenta mifanaraka amin'ny haitao mandroso. Mahery sy mateza izy io. Afaka mahatratra ny fandrefesana "an-tserasera" mandritra ny fizotry ny famokarana, ary marina sy haingana ny fandrefesana.
Fametrahana automatique fractional automatique
Izy io dia mampiasa famolavolana fanohanana fantsom-pahalalana manan-tsaina, izay afaka mamaha ny olan'ny fiovana eo am-panaovana fanapahana fantsona lava.
Famolavolana chuck pneumatika
Ny famolavolana cluck eo anoloana sy any aoriana dia mety amin'ny fametrahana, fitsitsiana asa, ary tsy anaovana rovitra. Ataovy azo antoka ny fitoniana amin'ny famahanana sy ny fanapahana; ny fanitsiana mandeha ho azy ny foibe, mety amin'ny fantsona maro, ny hafainganam-pandeha mihodina ambony, afaka manatsara ny fanodinana fahombiazana.
Modely milina GHJG-3015 ◆ GHJG4015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG-4025
Faritra miasa 1500x3000mm ◆ 1500x4000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2500x4000mm
Max. Haingam-pandeha 70m / min
Hafainganana haingana 0.6G
Hery azo ampiharina 1000W-6000W
1. Rafitra hazavana sy rafitra azo antoka azo antoka sy azo antoka.
2. Ny sehatra asa roa sy ifanakalozana asa dia mamonjy fotoana sy vidiny mampakatra.
3. Manam-pahaizana manokana amin'ny fanapahana takelaka vy sy fantsom-by, fitsitsiana vola.
4. Volavola vaovao ho an'ny milina iray manontolo miaraka amin'ny fantsona havia sy havanana ho an'ny fanangonana habakabaka fanangonana.
Teo aloha: Masinina manapaka laser fibre optika
Manaraka: Tube Fiber Laser Cutting Machine
cnc laser cutter amidy
mpanamboatra milina laser cnc
milina laser cnc amidy
laser amin'ny laser manapaka
milina fanapahana laser vidiny Sina
mpanamboatra milina laser
ravina vy sy fanapahana laser fibre fantsona
vidin'ny milina fanapahana vy
volafotsy vy fanapahana famolavolana
milina fanapahana laser fantsom-bozaka sy lovia